Profile Glass / Ubax Glass Warshadaha iyo soosaarayaasha Shiinaha Yongyu
Muraayadaha U muraayadda ah ee loo yaqaan 'U T' galaas waa muraayad midab leh oo yareynaysa labadaba aragga iyo gudbinta iftiinka.
Muraayada cajiinka ah waxay had iyo jeer u baahan tahay daaweynta kuleylka si loo yareeyo walwalka kuleylka iyo burburka ka dhalan kara waxayna dib u soo celineysaa kuleylka la nuugo.
Waxyaabaha muraayadda u leh ee muraayadda U u muuqda ayaa leh midabyo kala duwan waxaana loo kala saaraa gudbinta iftiinka. Waxaa lagu talinayaa inaad dalbato samballada muraayadaha dhabta ah ee matalaadda midabka dhabta ah.
Shumacyada midabada leh waxaa lagu ridayaa 650 digrii Celsius xagga dambe, gudaha wejiga muraayadda U ee muujinta midab leh, cimri dheer, xoq u adkaysta. Waxaa lagu heli karaa noocyo badan oo midabo leh oo ay ka mid yihiin muuqaal midab leh oo waara oo aan caadi ahayn.
Muraayada U dhalaalaya U
Muraayadaha U Frosted U Farsamaysan waxay siisaa iftiin badan oo iftiin leh, qaboojiye qabow. Duub ka-hortag ayaa la adeegsadaa si loo yareeyo faraha. Waxaa jira laba siyaabood oo lagu helo saamaynta qabow ee dhalada U profile: sandblasted iyo acid-etched.
Muraayadaha A-U U hooseeya
Hoos-u-E, ama hoos u dhac hoose, galaas ayaa loo sameeyay in lagu yareeyo cadadka laydhka iyo iftiinka shucaaca ee galaaskaaga gala, adiga oo aan yareyn tirada iftiinka soo gala gurigaaga. Daaqadaha muraayadaha-hooseeya waxay leeyihiin daaqad yar-yar oo khafiif ah oo cad oo iftiimisa kuleylka. Dahaarka ayaa xitaa ka khafiifsan timaha aadanaha! Xaraashka Low-E wuxuu ku hayaa heerkulka gurigaaga mid joogto ah iyagoo ka tarjumaya heerkulka gudaha ee gudaha.
Waxaan ku soo bandhignay tikniyoolajiyad khafiifin hooseeya khadkayaga soosaarka muraayadda U si aan u siino dalabyo ballaaran oo kala duwan oo ah muraayadda U profile.
Hore: Nidaamka Glass Rink Ice
Xiga: Nidaamka Jiilka Awoodda Dhalada ee Ulass Glass / U Channel Glass
Nidaamka Muraayada U Dhalada Glass
Muraayada U Channel Glass
Ku U Channel Glass
Glass Profile Glass / Dhalada U Dhaleeceynta Awooda ...